Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths X	8
Posted by Kyaemon on Jul 18, 2016 in Business & Economics, Community & Society, Education, Think Different | 8 comments
————- အဲဒီလို ဖြေခဲ့တာကို မဘတ်မိတာလဲ ဖြစ်နိင်တယ်၊
ရေတွေကို အသေပိတ်ပြီး သိုလှောင် ထားမှာလား၊ စိုက်ပျိုးရေးသက်သက်တည်ဆောက်မဲ့ ဆည်ကြီးလား၊
တနည်းပြောရရင် “ယာယီ” သိုလှောင် တာပါ၊ ပြေးခုံပစ် တန်းကျော်ပြေးပွဲ (hurdle ဟာဒယ်) မှာဆက်ပြေးကြတလို၊ ရေတွေက
အမှန်ကို ဘယ်ပြော မလဲ၊ မြေငလျင်နဲ့ဖြဲခြောက်လိုက်၊ရေကာတာပြိုကျမယ်လို့ခြောက်လိုက်၊
အဒေါ်ကြီး အလစ်မှာ ခါး ကို ကလိထိုးပြီး ဝါးလက်ခုတ်လို တချက်ပြီးတချက် ဟန်ချက်ပါပါ နဲ့လက်ခုတ် လဲတီး သီချင်းလဲ ဆိုတော့တယ်၊
ဆရာအနောက်နိုင်ငံက ဘာကြောင့် ရေကာတာ ထောင်သောင်း နဲ့ချီပြီးလုပ်ကြတယ်၊ ကိုယ့်အမိနိုင်ငံကြတော့ တလုံးတလေတောင် မ သဒ္ဓာ တာ ဘယ်လိုလဲ ဖြေစမ်းပါအုန်း?
(မြင်တဲ့အတိုင်း “ဒါးသွား ပန်ကာ Propellers ” အစား “သံခွက်သံအုံး Cups ” ကိုလဲသုံးတယ်)
ရေကျောပြတ်တယ်ဆိုတာလဲ မဟုတ်မမှန်ပါ၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှား ရှင်သန်စီးဆင်းနေကြမှာပါ၊
kai says: NLD အစိုးရက သူ့လက်ထက်မှာ.. ရေအားဆည်တွေ အသစ်မလုပ်ဖူးဆိုလား.. သတင်းကြားတယ်..။
ကြည့်ရတာ… လျှပ်စစ်ကို သတင်းစာရွက်နေကနေထုတ်တဲ့နည်းသစ်ပဲရထားသလား… မသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: ဒါကသတင်းပါ..။ ကျန်ရစ်အောင်ကူးတင်ထားတာပါ..။
apolo11 says: VOA က သတင်းတစ်ခုပါ
ဦးကြောင်ကြီး says: တီနိမ်တက် တီနိန်တီနိမ်တတ်….
Thint Aye Yeik says: ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတော်တော်များများက ဘာမှန်းညာမှန်း ချက်ကျလက်ကျ မသိပဲ…ဧရာဝတီကို စွတ်…ချစ်ပြနေတာ။ တရုတ်လက်ထဲ ပါသွားမှာတို့… ဧရာဝတီကြီး တိမ်ကောသွားမှာတို့ကို လျှာဖျားက မချ…ပြောနေကြတာ။ ဒီပိုစ့်ကို ပြဖို့… Save ထားလိုက်ပြီ။
kai says: (၂၀၁၂ စက်တင်ဘာတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဟားဗတ် ပညာရှင်၏ မြစ်ဆုံ ပြန်စရေး သုတေသန စာတမ်း “China and Yunnan Economic Relations with Myanmar and the Kachin State: Powering the Peace Process” အပြည့်အစုံကို http://ash.harvard.edu/files/chinayunnan.pdf တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
kai says: မောင်မောင်စိုး – မြစ်ဆုံပြဿနာ – အပိုင်း (၁)